25 guuraddii Dilkii Olof Palme - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
25 guuraddii Dilkii Olof Palme
Publicerat lördag 26 februari 2011 kl 11.15
25-tan guuro geeridii Olof Palme
Is-bedello ballaran ayaa caalamka ka dhacay 25-kii sannadood ee ugu dambeysay, wixii ka dambeeyay dilkii madaxii dawladda Iswiidhen ee waagaasi Olof Palme 28-kii bishii feebaraayo ee sannadkii 1986. Sannadihii 50-60-meeyo iyo 70-baatameeyadii ayuu caalamka ka socday wixii loo yaqiinay dagaalkii qaboobaa ee u dhaxeeyey labadii garab ee quwadda caalamku lahaa galbeedka oo uu hogaaminayay Mareeykanka iyo bariga oo uu hogaaminayay dalkii horay loo oran jiray Midowga Soofiyeeti. Isku-daygii xorriyad-doonka waddammadii bariga Yurub ee Hungary iyo Jekoslavakiya.
Waddammada Portuqaal, ispaaniya iyo Griigga ayey sidoo kale hogaaminayeen keli-taliyeyaal. Waxaa iyaguna sidoo kale waddammada dhaca qaaraddaha Afrika iyo Aasiya ka biloowday halganno ey ku doonayeen xorriyaddooda madax-bannaani.
Xaaladdii cakirreeyd ee midab kala sooca dalka koonfur Afrika iyo dawladda Mareeykanka oo isku dayday sidii ay xoog ugu maquunin lahayd dalka Viyetnaam iyo sidii looga hor-tegi lahaa in aannu nidaamka shuuciyaddu ku faafin.
Olof Palme ayay siyaasadda arrimmaha dibaddu saameeyn ballaaran ku yeelatay muddadii uu hoowlihii siyaasadeed uu dalka ka hayay, iyadoona mudadii dhoowrka sannadood ee uu tacliinta heerka jaamicadeed u joogay dalka Mareeykanka iyo kacdoonnadii halkaasi ka socday ee xuquuqda bani’aadamka iyo safarradii uu ku kala bixiyay waddammo dhaca qaaradda Aasiyana ku reebeen saameeyn ballaaran noloshiisa.
Is-bedel badan ayaa caalamka ka dhacay wixii ka dambeeyay falkii dilka ee lagula kacay Olof Palme 1986. Maxayse yihiin is-bedellada uu Olof Palme jecleeysan lahaa wixii ka dambeeyay geeridiisii. Su’aal noocaasiya ayuu mar uu ka jawaabayay Pierre Schori madaxii xafiiska dawladda ee xilligii Olof Palme, kana mid ahaa ragga ugu dhow uu ku jawaabay sidan:
- Xaqiiqdii waxay noqon lahayd jabintii darbigii kala qoqobaynayay galbeedka iyo bariga dawladdaihii Jarmalka. Waa is-bedel aan wax loo bar-bar-dhigaa jirin. Marka loo bar-bar-dhigo qaraxyadii argagixisada ee ka dhacay dalka Mareeykanka 11-kii septeembar ee sannadkii 2001, wuxuu bur-burkii darbiga Jarmalku ahaa mid aas-aas u noqday is-bedello badan. Middaa ayaan u malayn inuu jeclaysan lahaa.
Siyaasadda arrimmaha dibadda ayaa Olof Palme kaga tiilay qalbadda, wuxuuna wax badan ka qaalib noqday siyaasadda arrimmaha dibadda ee dalkan, sida uu sheegay Pierre Schori:
- Waa wax la wada ogsoon yahay inuu middaa ku kacay. Waana siyaasigii dalkan u furay daaqadda caalamka. Tallaabooyinkaa ayaa sababay in dhallinyaro badan ee dalkan u dhashay ey siyaasaddiisa la dhacaan waxna ka dhageeystaan Olof Palme.
lof Palme ayey dad badani u haystaan inuu yahay siyaasigii ugu aftahansanaa ee dalkani yeesho. Dhaleeceeynnadiisa ayaa loo arki jiray sawir ahaan. Isagoona mar ka hadlayay keligi-taliyihii Faraco ee sannadkii 1975 xukun dil ee deldelaad ku fuliyay shan dhallin-yaro ee ka soo jeeday qoowmiyadda Baskiga waxaa ereyadiisii ka mid ahaa:
- Midda la yaabka lihi waxay tahay in dhibaatooyinkaa halkooda ka sii socdaan….. in dhiigya-cabyadaasi dembiyada ey gelayaan sidaa u sii socdaan.
Isla sannadkaa ayuu Olof Palme weerar afka ah ku qaaday maamulkii shuuciga ahaa ee dalkii horay loo oran jiray Jekoslavakiya, uuna madaxda ka ahaa Gustav Husak, iyo ka hor-taggii uu isku dayay inuu joojiyo nidaamkii sooshiyaaliismada ee xisbiga uu madaxda ka ahaa:
- In hayadaha ammaanku tallaaba walba ku dhaqaaqaan sidii ay shaaca ugu ifin lahaayeen una tirtiri lahaayeen kooxaha iyo shakhsiyaadka dib u socodka xilliga ku habboon iyadoona aanan wax waan-waan ah lala gelin. Waa afka ey ku wada hadlaan keli-taliyeyaashu.
Sdaa si la mid ah waxaa ka mid ahaa ereyada taariikhda galay ee laga dhaxlay Olof Palme qudbad uu jeediyay xilli lagu jiray ciiddii Krismaska ee dhalashadii Nebi Ciise sannadkii 1972 oo ciidammada Mareeykanku dayuurrado ku duqeeyeen caasimada Hanooy ee waqooyiga Kuuriya. Palme ayaa middaasi ku tilmaamay fal u dhigma waxyeelooyinkii dawladdii Naaziga ee jarmalka, isagoona tiriyay magaalooyinka taariikhda galay.
- Magaalooyinka taariikhda galay ayey ku darsantay magac hor leh. Waa Haanooy sannadkii 1972.
Waxyaabaha uu ku hamin jiray Olof Palme, ayey ka mid ahaayeen sida uu sheegay Pierre Schori ey weli maanta taagan yihiin: Su’aasha la xiriirta nabad ka islaaxda Bariga dhexe, la dagaalanka fakhriga iyo gaajada, dhimista hubka halista ah iyo tageero buuxda ee lala garab istaago hayadda caalamiga ee Qarammada Midoobay: